mskhanal 11:17 AM
मैले एउटा चिनियाकथा सुनेको थिएँ।जुन यस्तो थियो।
दुई जना छिमेकीथिए। तिनी हरुको सम्बन्ध उदाहरणबनेको थियो। कारणतिनी एक अर्कोलाई सधैं सहयोगगर्ने, दु:खसुख बाड्ने अत्यन्तैराम्रो मेल थियो।तिनी हरु कोमेल देखेर अरुगाउँले लाई पनिइर्स्या लाग्ने गर्थ्यो।
तर एक दिननहुनु पर्ने घटनाघट्यो। त्यो दिनएक जना कोबन्चरो हरायो। बन्चरो कोखोजी हुन थाल्यो।त्यो मौका कोफाईदा भने गाउँको फटाहा लेलियो। उस्ले बन्चरोहराएको ब्यक्ती लाई बोलाएरबन्चरो चोर् कोबारेमा कुरा गर्‍यो। उस्लाईचोर् बताउनु भन्दापनि अर्कै स्वार्थथियो। त्यसैले उस्लेभन्यो "हेर तेरोघर मा सबैभन्दा धेरै आउनेजाने त्यही छिमेकीहो। तलाई पिरपर्ला तर हामीलाईपहिले देखी नैथाहा थियो कित्यस्को नियत ठीकछैन भनेर। बन्चरोचोर् तेरो छिमेकीनै हो। " त्योफटाहा ले त्योकुरा प्रमाणित गर्नथुप्रै प्रमाण समेत दियो।अन्तिम मा त्योब्यक्ती सहमत भयो किउस्को बन्चरो उस्कैछिमेकी ले चोरेकोहो भनेर।
अब सबै कुराफेरियो। बन्चरो हराउने छिमेकीले सिधै भन्नत सकेन तरभित्र भित्रै भनेत्यो कुरा लेउसलाई पोलिराखेको थियो।त्यसैले उ अर्कोछिमेकी को घरमा जान छाड्यो।तर अर्को छिमेकीभने यसबारे पुरैअनजान थियो। त्यसैलेउ भने आउनेजाने गरी रहन्थ्यो।तर पहिलो छिमेकीउसको आउने जानेक्रम लाई संकाले हेर्थ्यो। अबकुन सामान माआँखा लगाएको छर आउछ भन्नेउसको मन माबिचार आउथ्यो।दोस्रो छिमेकी ले गर्नेसहयोग लाई पनिस्वार्थ को रुपमा बुझ्न थालीसकेको थियो। तरबिस्तारै बिस्तारै दोस्रो छिमेकीपानी आउन जानछाड्यो।
पछी एक दिनपहिलो छिमेकी लेआफ्नै बारी माफेला पार्यो। अबउसलाई ठुलो पिडाभयो। आफुलाई त्यतीसहयोग गर्ने छिमेकीलाई गाउँले कोकुरा मा लागेरचोर् ठानेको कुराले खुबै पोल्यो।र गएर माफिमाग्यो। र पुनउनिहरु को मित्रतापहिले जस्तै भयो।
आज हामी हरुपनी बन्चरो हराएकाछिमेकी भएका छौ।फटाहा हरु लेबन्चरो चोर् छिमेकीलाई बताइरहेका छन ।हामी त्यही कुरापत्याएर छिमेकी लाई अबिश्वासगर्दै छौ। छिमेकीको सबै कुरालाई बन्चरो चोर्मा लगेर जोड्छौ।आफ्नो छिमेकी लाईएक पटक सोध्नुभन्दा उस्लाई बहिस्कार गर्नुमा भलाई ठान्छौं। अघी को कथा मा दुबै छिमेकी को दोस थिएन। दोस थियो त लडाउने मनासाय भएका कुतत्व हरु को। हाम्रो पनि दोस छैन होला तर त्यस्तै कुतत्व हरु हामी बिचमा खेल्दै छन। कहिले हराएको बन्चरो भेटिने होला र हामी बिच पुन त्यस्तै मेल होला? आसा गरौ त्यती बेला सम्म हाम्रो देश सग्लै होस्।
Anonymous May 1, 2012 at 1:48 PM
नेपाल बहुजातीय मुलुक हो, यहाँलाई थाहै छ । तपाईंलाई आफ्नो भाषा, धर्म र संस्कृति तपाईंलाई जति प्यारो लाग्छ अरूलाई पनि आफ्ना यी निधिहरू उत्तिकै प्यारो लाग्छ भन्ने कुरा बिर्सन हुँदैन । सबै जातिलाई आफ्नो पहिचानमा गर्व गर्ने अधिकार छ । ब्राम्हण/छेत्रीहरूले विगतमा पहिचानकै आधारमा राज्याबाट लाभ पाएनन् होला, तर उनीहरूको पहिचानलाई राज्यले सम्मान र संरक्षण गरेको पक्कै हो । तसर्थ, इतिहास र राजनीतिको सामान्य अध्ययनले पनि हामीलाई आदिवासी/जनजातिका कतिपय माग र अपेक्षा जायज हुन् भन्ने चेतना दिन सक्छ । बाँकी रह्यो जातीयता र राज्यसंरचनाको कुरा । मलाई पनि तपाईंलाई झैं जातीय आधारमा संघिय प्रणाली कुनै पनि हालतमा निर्माण गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ, तर जातीयता वा जातीय पहिचानको अपेक्षालाई समाज 'भाँड्ने वा फूट ल्याउने बिखण्डनकारी कुरा' भनेर पन्छाउन भने मिल्दैन कि ? जातीय अपेक्षा सम्बोधन गर्ने उपायहरू संघीय संरचनाबाट बाहिर खोजिनु पर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो । तपाईंहरूले जातीयता र संघियताको एकोहोरो विरोध गरिरहँदा मेरो मनमा "हामी अतिवादको चक्रमा फसिरहेका त छैनौ" भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ । समयसान्दर्भिक ब्लगको लागि धन्यवाद ।
Anonymous May 1, 2012 at 1:55 PM
अनि साँची अर्को कुरा, सामाजिक प्रेम, सद्भाव र एकता केवल सकारात्मक सोचबाट जन्मिने कुरा हैनन् । सामाजिक सद्भावका लागि सामाजिक संरचना पनि समतामुलक हुन आवश्यक छ । समाज रुपान्तरण र पुनसंरचनाको कुरा नगरी केवल जातीय सद्भाव खल्बलियो भनेर मात्र गुनासो गरिरहँदा हाम्रो वहस उतिसारो उपयोगी हुँदैन कि ?